Ungayisika njani iMango ngaphandle kokwenza i-Slimy Mess-PureWow - Ukutya
Kufuneka Ubone Ubuhle Bomtshato Ukutya Ukuhla Ukusinda Gynaec Amanqaku Omfazi Ombane Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso Iindlela Ulusu Itekhnoloji
Indlela yokutyala iMango ngamanyathelo ama-4 alula
Ukuba uhlala uthembele kwimango ekhenkcezisiweyo okanye engaphambi kokuba usikwe ukuze uphephe ukusika ngokwakho, awuwedwa. I-Mangos idume ngokuba nzima ukuyinqumla ngenxa yemigodi yayo ye-asymmetrical, isikhumba sangaphandle esomeleleyo kunye nenyama yangaphakathi ecekeceke. Kodwa ngamaqhinga ambalwa wokuphakamisa umkhono wakho, ezi ziqhamo zinamanzi ziyamangalisa ngokulula ukuchuba kunye nokulungiselela i-smoothies, i-snacking kunye-kunye nezithandwa zethu-izitya ze-guacamole. Nantsi indlela yokusika imango ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo (imikhonto kwaye iityhubhu), kunye nendlela yokuyixobula. I-Taco NgoLwesibini sele iza kuba nomdla ngakumbi.
ZIQHELEKILEYO: Indlela yokusika ipayinaphu kwiindlela ezi-3 ezahlukeneyo
iintlobo zokucheba iinwele zowasetyhini
Iindlela ezi-3 zoku Peel iMango
Unako okanye ungadingi ukuxobula imango ngokuxhomekeke kwindlela oza kuyisika ngayo. Ukushiya i-peel kuyo kunokuba luncedo olukhulu ngokubamba iziqhamo ezimtyibilizi-kodwa ngakumbi kamva. Nokuba kwenzeka ntoni, qiniseka ukuba uyihlambile imango ngaphambi kokuba uyihlambe okanye uyinqumle. Ukuba uthatha isigqibo sokuba uyaxobula imango yakho, nazi iindlela ezintathu zokuzama.
1. Sebenzisa isitshetshe semela okanye isikhewu esimile njengo-Y ukususa isikhumba semango. Ukuba iziqhamo zakho azivuthwanga kancinane, ziya kuba nzima kancinci kwaye zibe luhlaza phantsi kwexolo-qhubeka uchuba de inyama ebusweni ityheli eliqaqambileyo. Nje ukuba imango izive ibhityile, uyazi ukuba ufikelele kwinxalenye emnandi.
Mbini. Eyona ndlela siyithandayo yokuxobula imango eneneni ineglasi yokusela (yep, ngokwenene). Nantsi indlela: Sika imango kwisiqingatha, setha ezantsi kwisiqwenga ngasinye kumda weglasi kwaye ufake uxinzelelo kanye apho ulusu lwangaphandle luhlangana nenyama. Isiqhamo siza kutyibilika kanye kwiglasi (jonga oku ividiyo evela kubahlobo bethu eSaveur ukuba ufuna i-visual) kwaye awuzukuze ufumane izandla zakho zingcolile.
3. Ukuba ufuna ukufana Kaninzi ukubanjwa kwezandla, intwasahlobo ye isilayi semango . Isebenza nje nge-apple slicer-konke okufuneka ukwenze ukuyibeka phezulu kwimango kwaye uyicinezele ujikeleze umngxuma wayo. I-peasy elula.
Ngoku ukuba uyazi indlela yokuxobula imango, nazi iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokusika.
Ungayisika njani iMango kwiiSlices
1. Chuba imango.
indlela yokunciphisa iinwele eziwayo
2. Sika iziqhamo ezixobukileyo ubude kumacala amabini kufutshane nomhadi kangangoko.
Qala ngokubeka imela yakho embindini wemango, emva koko ushukume malunga ne & frac14; -inch kwelinye icala ngaphambi kokusika.
3. Sika amanye amacala amabini ajikeleze umngxuma.
Ukwenza oku, yima imango phezulu kwaye uyinqumle ngokuthe nkqo kwizilayi. Cheba yonke inyama uphume emngxunyeni ungene kwizilayi ezongezelelweyo ukuze ufumane esona siqhamo.
4. Beka iziqingatha ezibini ezishiyekileyo ozisikileyo kuqala ezantsi kumacala awo athe tyaba.
Sika isiqhamo sibe ngamacwecwe ngokobungakanani bakho obufunayo (ukusuka kwimikhonto ukuya kwimatshisi) kwaye wonwabe.
Uyityala njani iMango kwiiCubes
1. Sika kwicala ngalinye lemango engatyabuli ecaleni komngxuma wayo.
2. Inqaku lenyama yangaphakathi yemango.
Sika igridi ngemela yokubamba ngokwenza ukusika okuthe tyaba uze usike ngokuthe nkqo kuyo yonke into.
3. Thatha isiqwengana ngasinye igridi ijonge phezulu kwaye utyhale ulusu kwicala lakho ngeminwe ukujika isilayi semango ngaphakathi-ngaphandle.
I-peel yile nto yenza ukuba le ndlela ibe lula.
iyeza lendalo lokuvela kwakhona kweenwele
4. Sika iityhubhu ngemela yokubonisa ukonwabele.
Ngamana singacebisa ukuba ubonise ngeziqhamo zakho ezisandula ukusikwa kunye nenye yezi zokupheka okumnandi okumnandi ?
Enye into: Nantsi indlela yokukhetha iMango evuthiweyo
Ungazi njani ukuba imango ivuthiwe? Konke kuza kwindlela esiva ngayo isiqhamo kunye nevumba laso. Kanye njengeepesika kunye neeavokhado, ii-mangos ezivuthiweyo ziya kunika kancinci xa zicudisiwe kakuhle. Ukuba lilitye elilukhuni okanye eligcwala kakhulu, hlala ujonge. Ii-mangos ezivuthiweyo zihlala ziziva zinzima ngenxa yobukhulu bazo; oku kuhlala kuthetha ukuba zizele ijusi kwaye zilungele ukutyiwa. Nika isiqhamo ukuba sitsalele kakuhle kwisiqu saso ngaphambi kokuba uthenge. Ngamanye amaxesha uya kuba nakho ukuqaphela ivumba elimnandi, lemango-kodwa ungakhathazeki ukuba awunalo. Qiniseka ukuba akukho livumba limuncu okanye elinxilisayo, oko kuthetha ukuba imango igqithile.
Ukuba awuzukuyitya ngoko nangoko, thabatha imango epholileyo kwaye uyishiye kwikhawuntara yasekhitshini iintsuku ezimbalwa de ithambe. Ungayikhawulezisa inkqubo yokuvuthwa kwemango ngokubeka imango kwisingxobo sephepha esimdaka ngebhanana, uyiqengqe ivaliwe kwaye uyishiye kwikhawuntara kwiintsuku ezimbalwa. Ukuba unayo imango esele ivuthiwe ezandleni zakho, ukuyigcina efrijini kuya kuyimisa inkqubo yokuvuthwa kwaye kuyigcine ekujikelezeni kwi-mush.
ZIQHELEKILEYO: Uyisika njani ivatala kwiindlela ezi-5 ezilula
Iifilimu ezingaphezulu ezingama-20 zothando
Izigaba Ukuhombisa Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso Gynaec
itshathi yokutya yokunyusa ubunzima
amayeza asekhaya okubuyisa iinwele
imilo embhoxo ubuso iinwele ababhinqileyo
phila iiolimpiki zihamba ngokukhululekileyo